Nhau - Mumakore achangopfuura, kukura muindasitiri yeChina yekumba mbatya yakadzikira uye zvigadzirwa zvechivanhu zvakura ………
Mumakore achangopfuura, kukura muindasitiri yeChina yekumba mbatya yakadzikira uye zvigadzirwa zvechivanhu zvachembera, nepo mabhii ari kubuda ari mumatanho ekutanga ekukura. Panguva imwecheteyo, mazhinji mabrands epasirese ane ruzivo rwakawanda muR & D, dhizaini, nzira dzekutengesa uye oparesheni yekumhanyisa iri kuwedzera kuwedzera kwavo mumusika weChinese. Pamusoro pemaguta ekutanga-tanga, ivo vari kunyurawo mumaguta echipiri nerechitatu, vachiunza makwikwi anotyisa nemabhurugwa ekupfeka epamba uye nekumanikidza mabhizinesi ekupfeka kuti achinje mukupindura mamiriro ezvinhu.
isu takapfupikisa iwo mana anozivikanwa eindasitiri poindi, zvichiteerana ndeiyi:
Kutanga, Kupinda kwezvipfeko zve bespoke mumusika weChinese kwakaderera
Bhizinesi modhi yemabhizimusi ekugadzira nguo muChina inonyanyo kuve yakakamurwa kuita kugadzirwa uye kutengesa kwembatya uye kugadzirisa kwehembe. Vazhinji vagadziri vehembe vanogadzira zvipfeko zveyakajairwa mamodheru muhuwandu hwakawanda. Zvipfeko zvakagadziriswa, kune rumwe rutivi, zvinoda kuve zvakagadziriswa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu evamwe vatengi. Iyo inogadzirwa yega uye yakavakirwa pakutengesa. Iko hakuna njodzi yekuverenga, asi chiyero chekushanda chidiki.
Chechipiri, Kune matatu marudzi emumba nguo yekugadzirisa mabhizinesi
Parizvino, emumba zvipfeko zvekushambadzira mabhizinesi anonyanya kuve akapatsanurwa muzvikamu zviviri: chekutanga, kune couture studio kana dhizaina dhizaini, Rudzi urwu rwehembe yekushongedza ine refu yekugadzira kutenderera, yakakwira unit mutengo, ine yakakwira-kumagumo tarisiro yevatengi boka uye diki reboka Inoteverwa neimwe yechiratidzo mbatya kukudziridza tsika zvipfeko tambo, kunyanya kune vatengi veboka mune diki batch, zvine hushoma kuomarara kwetsika masevhisi, senge yunifomu yechikoro.
Yetatu, Iyo mamiriro ekuvandudza eChina's mass zvipfeko zvekugadzirisa munda
yakakanganiswa neiyo yekushandisa nhanho uye ipfupi yekuvandudza nguva, kunyangwe kugamuchirwa kwepfungwa yekushongedzwa kwezvipfeko kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma, hapana chiratidzo chenyika mumunda wehukuru zvipfeko zvekupfeka, uye musika wepamba hausati wakura zvakanyanya.
Panyaya yevatori vechikamu vemaindasitiri, vamwe vagadziri vezvipfeko vatanga kupinda mumunda wekushongedzwa kukuru kwehembe dzakasarudzika Iyo indasitiri yatanga kuita bhizimusi rekugadzirisa bhizimusi, uye makambani akanyorwa akaita zvimwe zvibudiriro (kana zvakanyorwa) kunyanya
Chechina, Kupokana kuri pakati pe data-inotungamirwa uye kugadzirwa kwehungwaru kugadzirisa nehunhu uye chiyero.
Post nguva: Oct-09-2020